Nezvedu | Amso Solar Technology Co., Ltd.
9BB Hafu Yakatemwa Maseru Solar Paneli
9BB hafu yesero ese madema mono 450w
9BB hafu yesero mono 350w-375w
9BB hafu yesero mono 370w
9BB hafu yesero mono 430w
9BB hafu yesero mono 420w-445w
5BB Hafu Yakatemwa Maseru Solar Paneli
5BB 120 maseru mono 310w-335w
5BB 120 masero poly 270w-290w
5BB 144 masero mono 380w-400w
5BB 144 masero poly 320w-350w
akaenzana ezuva maseru
36 maseru mono ezuva mapaneru 165w175w190w
36 maseru poly solar maseru 150w160w170w
48 maseru mono ezuva mapaneru 230w240w250w260w
48 maseru poly solar maseru 200w210w220w230w
60 maseru mono ezuva mapaneru 290w310w320w
60 maseru poly solar maseru 260w270w280w290w
72 maseru mono ezuva mapaneru 350w360w380w390w
Masero makumi manomwe nemapfumbamwe emagetsi ezuva 310w330w340w350w
96 maseru mono solar panels 460w470w480w490w500w
Maseru makumi mapfumbamwe nemasere mapaneru ezuva masolar 420w430w440w450w460w
Diki Saizi Mapaneru eSolar
mini saizi poly solar mapaneru 20w
mini saizi poly solar mapaneru 50w
diki saizi mono solar panels 45w60w75w90w
diki saizi poly mapaneru ezuva 40w50w65w80w
diki saizi mono solar mapaneru 105w120w130w150w
diki saizi poly ezuva mapaneru 110w120w130w
Amso Solar Technology Co., Ltd.inogadzira maseru ezuva akagadzirwa pamusoro pegumi nemaviri makore. Tine zviitiko zvizere pane ese maOEM uye maODM services. Kwemakore apfuura, Isu takamisa makambani akasimba ane akawanda mabrandi uye tier imwe vagadziri. Isu takatangwa zviri pamutemo muna2017 kuti tiunze marita edu: Amso Solar. Fekitori yedu iri padhuze neakanaka HongZe Lake, iri muHuaian, JiangSu, China.
Amso Solar akasarudzika mukugadzirwa kwemaseru ezuva uye mapaneru ezuva anovimbiswa nemakore edu makumi maviri neshanu warandi. Yedu yezuva emapanera ekugadzira mitsara inovhara iyo 5BB uye 9BB akateedzana, simba renji zvakanyanya kubva pa5w kusvika ku600w, uye vanopedzisa akagadziriswa ezvemaseru ezvezuva, ematanho ezvemaseru ezuva uye hafu maseru ezuva mapaneru. Mukuona kwehukuru hwesero, tinoshandisa matatu makuru maseru ezuva mukugadzirwa kwemapaneru ezuva: M2 156.75mm, G1 158.75mm, uye M6 166mm.
Kugutsa vatengi 'chimwe-mira yekutenga ruzivo, isu takavandudza rimwe bhizinesi kugovera system yezuva zvikamu, senge PWM uye MPPT controller, lead-acid, gel uye lithium bhatiri, off-grid uye pa-grid inverter, inokwidza makiti. Zvichakadaro, isu tinopawo yakazara hunyanzvi dhizaini uye nekuparadzira sevhisi ye grid-yakasungirwa uye isiri-gridhi rezuva simba system.
Kuti tiongorore musika wepasi rose, isu takawana zvimwe zvitupa zvekusangana zvakasiyana zvinodiwa seEC, TUV, CQC, SGS, CNAS. Isu tinochengeta yakakwira mwero muyero wekusarudzwa kwezvinhu, yakaunza michina yepamberi pasirese, uye zvakanyatso ita mhando yeanodzora system kuverengera kuti chigadzirwa chimwe nechimwe kubva kuAmso Solar chakakodzera. Yedu yegore module module inosvika pa1 0 0 megawatt. Misika yedu mikuru inosanganisira epamba, Southeast Asia, Europe uye Mid-East.
Chiono chedu ndechekuparadzira mashandisiro esimba rezuva uye kuita kuti kushandiswa kweichi chinogona kudzoreredzeka kugone Tinotenda izvo kubatana kwebhizinesi kunofanirwa kuunza mabhenefiti uye kunofanirwa kutsvaga kubatana kwenguva refu. Amso Solar tarisa nemoyo wese kubvunza kwako uye wakagadzirira kupa technical technical solar solutions.
Kero: Rm 1603, 99 Zhongshan Rd, Nanjing, China